Gbasara Anyị | Mit-ivy ụlọ ọrụ Co., Ltd.
Kpọọ Anyị: WhatsApp / weChat: + 86-13805212761 / + 86-18705999280 / + 86 199 6195 7599
MIT-IVY ụlọ ọrụ CO., LTD
MIT –IVY Chemicals Mmeputa Co., Ltd. bụ onye na - emepụta ihe na onye na - azụ ahịa kemịkal maka afọ iri na isii nke guzobere ụlọ ọrụ nke aka ya nke nwere ngwa nrụpụta zuru oke yana njikwa njikwa na ndozi igwe.
Anyị na-eji teknụzụ nrụpụta dị elu na ụzọ nnwale iji chọpụta mmepụta, njikwa na-achịkwa ịgbaso ọkọlọtọ. SGS, ISO9001, ISO140 01, GB / HS16949 na T28001 kwadoro anyị.
Mit-Ivy isi ngwaahịa gụnyere ihe ndị a：
Ejiri akwa akwa, akwa ogwu .dyes.ezi. kemịkalụ kemịkalụ
2-Naphthol Bon acid 2,5-Dichlorotoluene 2,3-Dichlorobenzaldehyde 2 ', 4'-Dichloroacetophenone 2,4-Dichlorobenzyl mmanya 3,4'-Dichlorodiphenyl ether "1,3-Dichlorobenzene
CI Basic odo 2 "Crystal violet lactone CVL Methyl violet" Basic Green 4
Dyestuffs, ndị na-ahụ maka ọgwụ, ndị na-egbu pesticide, adhesives, ndị ọrụ anchoring na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. emeputa site na teknụzụ ohuru nke nwere ezi nguzo na idi ocha kariri 99.7%.Anyị isi ahịa na-agụnye America, India, Africa, Indonesia, Turkey, South-East Asia, West Asia na na. Anyị bụ ndị isi soplaya nke chemical ngwaahịa bụghị naanị obodo kamakwa mba ahịa. MIT-IVY Industry Main ngwaahịa mbak 97% nke anụ ụlọ ahịa ọkachamara na mmepụta na management, Anyị nwere ike ezitekwara ngwaahịa na ihe mpi na-eri. na adịchaghị mma na price na nnabata ịkpọ.
Industrial anhydrous Sodium sulfate ntụ ntụ bụ otu n'ime ihe ndị bụ isi nke kemịkalụ kemịkalụ, nke a na-ejikarị ya eme ihe na kemịkal, akwụkwọ na iko, dyestuff, ibi akwụkwọ na agba, akwa na ụlọ ọrụ ọgwụ. A na-ejikwa ya na ịmepụta eriri sịntetik, akpụkpọ anụ, ihe ndị na-enweghị ọrụ, enamel enamel na na. Industrial anhydrous sodium sulfate ngwaahịa nke dị ọcha na ezigbo mmiri mmiri, na-ekpuchi ngwaahịa nke 20 ntupu - 2000 mesh, nke a na-ejikarị na ndị na-emegharị ihe, batrị reagents, glots latex, pesticide intermediates, fatịlaịza, ndị na-ahụ maka ọgwụ na nri na nri ndị ọzọ na mpaghara ndị ọzọ, na mmepe nke akụ na ụba mba na mmụba nke ibi ndụ ndị mmadụ nwere njikọ chiri anya.
1. Onye ahịa bụ nke mbụ. Anyị na-anwa iwetara ndị ahịa anyị uru kachasị dabere na uru bara uru.
2. Nkwenye bụ ihe kachasị mkpa.
3. Njikwa ogo bụ ntọala anyị.
4. Oke echiche nke ibu ọrụ.
Anyị ga-ahụ maka ọ bụghị naanị ngwaahịa anyị, ndị ahịa anyị, ndị na-eweta anyị kamakwa ọha mmadụ.
Anyị esoro na-erite uru na obodo, na mgbe niile na-emepụta uru maka ndị ahịa, na-ejide iguzosi ike n'ezi ihe na-erite uru na-enwekarị nkịtị. Anyị nwere klas mbụ ọkachamara oru oru na ngwaahịa nnyocha na mmepe. Ya mere, anyị nwere ike ịnye ndị na-etiti etiti maka ọrụ gị ma belata mkpokọta njikọ gị iji nye gị ngwaahịa dị ọcha. Na-ahụ maka ndị ahịa anyị, ndị ọrụ anyị, gburugburu ebe obibi na ọha mmadụ nwere ngwa ngwa na ọganiihu akụ na ụba na-enweghị nkewa. Anyị na-elekwasị anya n'oge na-arịlị arịlịka na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na azụmaahịa anyị na-agbaso ụzọ ọhụrụ, na-adigide. Teknụzụ mbụ, ogo dị ka ihe ndabere, ndị ahịa dịka Chukwu, iguzosi ike n'ezi ihe dị ka ndabere.
Ihe mgbaru ọsọ anyị kasịnụ:
Dabere na-aga n'ihu mgbalị ịzụlite ọhụrụ chemical ubi, anyị na-enye environmentally friendly na elu-tech ngwaahịa izute chọrọ nke ndị ahịa anyị.
ITlọ ọrụ MIT-IVY ji obi gị dum jeere gị ozi.
2.The mbukota nwekwara ike ịbụ dị ka ndị ahịa` chọrọ
3.Ọ bụla jụrụ ga-aza n'ime 24 awa
4. Ọnụahịa ụlọ ọrụ.
5. Ibufe ya ozigbo. Anyị nwere ezigbo nkwado na ọtụtụ ọkachamara forwarders; Anyị nwere ike izipu gị ngwaahịa ndị a ozugbo ị gosipụtara iji.
Anyị nwere ike ịrụ ọrụ ụgbọ mmiri gbawara agbawa, zute ụlọ ọrụ MOQ Anyị ga-eme ndokwa izipu ngwaahịa sitere na ụlọ ọrụ anyị gaa n'ụlọ nkwakọba ihe gị.
Anyị nwere ike ịkwado obere iwu gị site na ọtụtụ ụlọ ọrụ, na-eweta ihe niile site na iji ụzọ dị oke ọnụ ahịa dịnụ. N'oge ịhazi usoro, anyị ga-enye gị nkọwa gbasara olu nke ihe ọ bụla na ụdị akpa ga-eji.
Anyị na-enye ngwugwu zuru oke nke kwesịrị oke osimiri, na-ahazi ihe niile ruo mgbe ngwaahịa rutere n'ụlọ nkwakọba ihe ma ọ bụ ebe nkesa gị.
Enwere ike ịnyefe ya.
- Tinye n'ọrụ gị ibu-forwarder
- FOB ka ọdụ ụgbọ mmiri dị na China
- CIF ka ọdụ ụgbọ mmiri kacha nso gị
Ma ị nwere nke gị forwarder ma ọ bụ na ị ga-achọ ịhazi mbupu; ma ị na-ahọrọ FOB ma ọ bụ CIF, anyị nwere obi ụtọ ihota ma weta otu ụzọ ị họọrọ. Biko nweere onwe gị iso anyị kwurịta nhọrọ niile.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa ma ọ bụ pricelist, biko hapụ email gị ceo@mit-ivy.com ma ọ bụ WhatsApp 008613805212761, na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.ase